Factory Load cells - Mpanamboatra sela mpanamboatra, mpamatsy
Fametrahana fotoana fohy / ivelan'ny foibe
Hopper sy lanja fandanjana
Ny lanjan'ny biolojika
Hamarino milina milanja sy mameno
Sehatra momba ny sehatra sy ny fehikibo
Vahaolana OEM sy VAR
–Fitaovana tsy azo ovaina, voaisy tombo-kase tamin'ny laser, IP68
–Mameno ny lalàna OIML R60 hatramin'ny 1000d
–Mbola ampiasaina amin'ny mpanangona fako sy amin'ny fametrahana rindrina amin'ny tanky
Kilasy marina C3
Novonoina ny enta-mavesatra afovoany
Fananganana firaka aliminioma
Max. capacities avy amin'ny 5 ka hatramin'ny 75 kg
OIML taratasy misy fangatahana
Ny taratasy fanamarinana azo alaina amin'ny fangatahana
Ny sela mitondra entana tokana avo lenta tokana natao ho an'ny fananganana mizana amin'ny lampihazo. Ny lafiny lehibe misy ny fametrahana azy dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana mandanjalanja sambo sy hopper ary fampiharana amin'ny fibatana fako eo amin'ny sehatry ny fiara milanja. Namboarina tamin'ny aliminioma sy voaisy tombo-kase amin'ny tontolo iainana miaraka amin'ny vilany tanimanga mba hiantohana ny faharetana.
Ny sela enta-mavesatra dia sela mavesatra amam-bika miaraka amina fitarihana mifanila eo anilany sy maso miondrika mifantoka. Amin'ny alàlan'ny fanamboarana lasely amin'ny laser dia mifanaraka tsara ampiasaina amin'ny indostrian'ny simika, ny indostrian'ny sakafo ary ny indostria mitovy amin'izany.
Ny sela enta-mavesatra dia lasakan'ny laser ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny kilasy fiarovana IP66.
Ny teboka enta-mavesatra tokana dia vita amin'ny alimina alimika manokana, ny fonosana anodized dia mahatonga azy io hahatohitra bebe kokoa ny tontolo iainana.
Izy io dia azo ampiasaina irery amin'ny fampiharana ambaratonga sehatra ary manana fahombiazana avo sy fahaiza-manao avo.
Mety tsara raha ampiasaina amin'ny indostrian'ny simika, indostrian'ny sakafo ary indostria mitovy amin'izany.
Ny sela mitondra entana dia manome valiny azo averina azo atao marina, mandritra ny fotoana maharitra na dia amin'ny tontolo indostrialy henjana aza.
Ny entana dia manome ny fepetra takiana amin'ny fiarovana IP66.
SPB dia misy amin'ny kinova 5 kg (10) lb hatramin'ny 100 kg (200 lb).
Ampiasao amin'ny mizana bench, manisa mizana, zahao ireo rafitra milanja, sns.
Vita amin'ny alimo aluminium izy ireo.
Vahaolana amin'ny lanjan'ny hopper sy ny fitoeram-bokatra noho ny fahaizany avo sy ny haben'ny sehatra lehibe. Ny schema fitomboan'ny sela mavesatra dia mamela ny fidirana mivantana amin'ny rindrina na ny rafitra mitsangana mety.
Izy io dia azo apetaka amin'ny sisin'ny sambo, ary tsy hadino ny haben'ny lovia ao anatiny. Ny habaky ny fahaiza-manao malalaka dia mahatonga ny sela mavesatra azo ampiasaina amin'ny fampiharana indostrialy maro karazana.
–Famantarana nomerika nomerika (RS-485/4-wire)
–Mbola nomena isa (nomena): 0,5t… 25t
–Miverina amin'ny laoniny ny tenany
–Y laser lasantsy, IP68
–Miorina amin'ny fiarovana mahery vaika
–Nominal (nomeraina) entana: 10t… 40t
–Nominal (nomena) entana: 15t… 50t
–Ny tenany dia mamerina pin rocker
–Ny lasantsy vy vita amin'ny vy tsy voaangona, IP68
Ny lanjan'ny fikajiana ho an'ny mizana nomerika, Lanja voamarina, Ny lanjan'ny fikajiana ny refy, Shear Beam Load Cell, Calibration lanjan'ny napetraka, Calibration Mass,